हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सः नाफा बढ्यो र बिमा शुल्क घट्यो – Investing Nepal
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सः नाफा बढ्यो र बिमा शुल्क घट्यो
By: Nepse Direct Aug 13, 2019
Insurance Company Quarterly Report Fourth Quarter
चौथो त्रैमासको वित्तिय बिबरण अनुसार हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड HGI 3.43 % 362.00 ले अघिल्लो आवको सोही अवधीमा ३२ करोड ८८ लाख २० हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । जसअनुसार यस अवधीमा कम्पनीको बीमाशुल्क आर्जन १७.६० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । साथै, कम्पनीले हालसम्म रू. २७ करोड ९ लाख ५९ हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
यस्तै, कम्पनीले यस अवधीमा रू. १९ करोड ८५ लाख १२ हजार खुद नाफा कमाएको छ र अघिल्लो आवको सोही अवधीको तुलनामा ४०.१० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको सो अवधीमा कम्पनीले रू. १४ करोड १६ लाख ८९ हजार खुद नाफा कमाएको थियो ।
यस्तै, कम्पनीले हालसम्म रू. १ अर्ब ४९ अरोड ८० लाख अल्पकालिन लगानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । साथै, रू. ४७ करोड ६६ लाख २० हजार दिर्घकालिन लगानी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १८.९४ प्रतिशत घटी हो ।
२५ करोडभन्दा बढी जगेडा कोष
कम्पनीको जगेडा कोष समिक्षा अवधिमा ६३.६३ प्रतिशत बढेर २५ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीको जीवन बिमा कोष २६.५५ प्रतिशत बढेर ४७ करोड ३० लाख ८२ हजार मा सिमित भएको छ ।
चुक्ता पूँजी स्थिर
असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २ करोड ७२ लाखले स्थिर रहेको छ । कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा १७ करोड ४८ लाख ४२ हजार दाबी भुक्तानी गर्न सफल भएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.१३ प्रतिशत बढी हो ।
४ करोडभन्दा बढी कुल जारि बिमालेखको संख्या
कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा ४ करोड ६२ लाख ५ हजार कुल जारि बिमालेखको संख्या गर्न सफल भएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ११.५९ प्रतिशत घटी हो ।
As of 4th Quarter 2075/76
amount in "000"
This Quarter 2075/76
Short term investment & loan
Long term investment & loan
Total insurance policy issued
Net claim paid
Net insurance premium
HGI , HGIPO